Qaban qaabo lagu furayo xeradii ay dhiseen Turkiga oo Muqdisho ka socota | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qaban qaabo lagu furayo xeradii ay dhiseen Turkiga oo Muqdisho ka socota
Qaban qaabo lagu furayo xeradii ay dhiseen Turkiga oo Muqdisho ka socota
Muqdisho(SONNA) Waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya qaban qaabo ku aadan munaasabadda xarrigga looga jarayo dhismaha xaruntii tababarka Ciidamada oo ay hirgelisay Dowladda Turkiga,taasi oo la filayo in maanta si rasmi ah loo furo.
Waxaa munaasabadda ka qeybgalaya mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Turkiga,iyadoo saldhigani loogu talagalay in markiiba lagu tababari karo ilaa 10,000 oo askari.
Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan Taliyaha Guud ee Ciidamada Dalka Turkiga Hulusa Akar,iyadoo saaka lafilayo in ay Muqdisho soo gaaraan mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Dowladda Turkiga si ay uga qeybgalaan munaasabdda xarig jarka ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo oo Muqdisho kula kulmay Taliyaha Guud ee Ciidamada Turkiga,ayaa kala hadlay sidii Dowladda Turkigu ay u kordhin lahayd taageerada ay u fidinayso Soomaaliya.
Previous articleQoysas ku dhaqan Kaam ku yaal duleedka Magaalada Baydhabo oo ay lasoo
Next articleDanteennu waxay ku jirtaa in loo qumo dhismaha dalka.